Semalt Expert: Ziva Zvekare neEmail Spam kana Junk
Mashoko asina kubvunzwa kuti vashandisi vepaIndaneti vanowanikwa kuburikidza ne emaimeri vanozivikanwa se email email spam (zvakare, inozivikanwa sejunk). Maererano nevadzidzisi vepaIndaneti, kushandiswa kwe spam kwakapararira "kubvira kuma1900, uye iye zvino ndiyo inowanzosangana nematambudziko anosangana nevashandisi vewebhu. Iko email yevamiriri ve spam inopiwa nema spambots, ayo anowanzoita nzvimbo dzinotamba webhu vachitsvaga kero dze email.
Munyaya iyi, Oliver King, the Semalt Mutengi weMutengi weVatengi, anogadzira maitiro evanhu vanowanika ma email, spamming techniques uye nzira dzekudzivisa mitemo ye spam.
Kune marudzi akasiyana-siyana e-email spams, iyo yakawanda kwazvo iyo yakasikwa kuti iwedzere kukanganisa kwakanaka kana zvirongwa zvebhizimisi zvakarurama - stufe a gas al miglior prezzo. Kazhinji, spam inoshandiswa mukusimudzira kuwanikwa kwekureruka kwezvirongwa, kubhejera paIndaneti, mikana yebasa uye zvinodhaka zvinodhaka zvinodhaka. Spam inoshandiswa kuitisa email scams. Imwe muenzaniso unozivikanwa ndeyekufambisa-kubhadhara mari yekunyengedza apo munhu anogamuchira anogamuchira mamiriyoni ega nechipo icho chinonzi chinoguma mu mubairo. Munhu anonyengedzera anopa mhaka iyo mari inotarisa inotarisirwa kubva kune yaanoshungurudzwa asati akakumbira mari yemari yakagoverwa pakati pevaiti vezvakaipa vakawanda vari muIndaneti. Kamwe kana kubhadhara kuri kuitwa, vanyengeri vanorega kupindura kana kuumba nzira itsva dzokukumbira mari yakawanda..Phishing emails ndeimwe nzira yekunyengera kwepamisi, umo maimeri ari kuonekwa sekutaurirana kwemashoko kubva kuInternet processors, mabhangi, uye mamwe masangano emari anotumirwa kune vanhu. Kazhinji, magwaro e-phishing anogamuchirwa kune webhusaiti iyo yakafanana nesangano rehurumende, uye munhu anoshandiswa kupa zvinyorwa zvake zvakadai sekadhi rechikwereti nemashoko ekutumira. Nokudaro, vashandisi veIndaneti vanorayirwa pamusoro pekuzarura spam emails, kubvumira kana kupindura kune mharidzo. Uyezve, spam email messages inogona kuudza mamwe marudzi e-malware kuburikidza nemakanyorwa, anowirirana kune masayiti ane virusi kana mafaira okubatanidza.
Kune nzira dzakawanda dzinoshandiswa nevatambi kuti vatumire mazita emajeri kune avo vanogamuchira. Mukutanga, Botnets inobvumira vatengesi veInternet kuti vashandise C & C kana mavhareji ekuraira uye ekudzivirira kune zvose kutora nekuparadzira spam yakawanda. Chechipiri, Snowshoe spam inzira yekushandisa shanduro yakawanda ye email uye IP mazita nekutarisa kwemauto kusatidzira kuparadzira spam. Pakupedzisira, pasina email email spam inzira inokura pakati pevanokanganisa. Izvi zvinosanganisira kutumira mameseji e-mail pasina mitsara uye miviri yemuviri. Iyo nzira inogonawo kushandiswa mumutambo wokukohwa, apo sevha ye email inorwiswa nechinangwa chekusimbisa maizai e-mail kugoverwa kuburikidza nekugadzirisa kusavhiringidza kana kutariswa mareta. Muchibvumirano ichi, spammers haafaniri kuisa mitsara yemashoko kana kutumira maimeri. Mune zvimwe zviitiko, magwaro emaumerica asina kuvhara anogona kuvanza mhonye uye mavirusi anokwanisa kuparadzirwa kuburikidza neHTML codes akabatanidzwa mune email.
Kugamuchira dzimwe mhando dze spam hazvidziviriki. Zvisinei, vashandisi vepaIndaneti vanogona kuderedza huwandu hwejunk iyo inobata mabhokisi ekunyora. Mazhinji emajeri emajeri anopa spam filtering kuti aite mhinduro dzekufungidzira kuva faira. Kuvhara, kuvhara uye kuenzanisa zviitiko zvemajeri asina kuverenga ndeimwe nzira yekudzivirira vashandi kuti vasagamuchira ma-spam ma-mail mumabhokisi avo einbox. Kudzivirira kwakanyanya kunogona kuwanikwa kuburikidza kuwedzera yechitatu kupesana-spam filtering pamishumo ye email kune vese vese maklayi emaimeri kana kuti kunyange kugadzira mumwe munhu anoshandisa mazita kana mazita ayo munhu anoshandisa kana kuti anoda kugamuchira ma email.